Ady vava, vava ady… | NewsMada
Ady vava, vava ady…
Par Taratra sur 23/04/2018
Hanao ahoana ihany izao toe-draharaham-pirenena izao? Maro ny manahy korontana na krizy. Na efa ao anatin’izany izao… Amin’izany, misy ny minia manao bemarenina tsy mihaino na miraharaha ny hafa. Atao ihany ny atao, na iza hiteny na iza tsy faly. Izany no hoe lehibe tsy meloka, tsy mba diso? Tsy mahagaga raha mianjera ho azy amin’ny fanamparam-pahefana ny raharaha, fanaovana amboletra, jadona…
Amin’izao fifandroritana amin’ny lalàm-pifidianana izao, tsy misy na tsy eritreretina izay hifanatonana, hiheverana izay mba hifampidinihana ho amin’ny fiaraha-mitady vahaolana. Miandry inona na iza? Zary fifanenjanana sy fifanenjehana ny raharaha, ifampiandrasana kendry tohina sy ifanomezan-tsiny aza. Ahina ny mety hisian’ny korontana na krizy, nefa odian-tsy fantatra, tsy mampiraika, tsy ahoana…
Vava izao, vava…Tonga hatramin’ny vava tsy ambina ny an’ny sasany. Amin’izany, samy miteniteny sy hampiteniteny izay vavana rehetra. Izay avo feo sy miteny matetika no manana ny marina? Ady vava ny raharaha, ahina hiafara amin’ny vava ady… Nahoana? Rehefa be sy matetika loatra ny fitenenana, tsy hita sy tsy fantatra intsony izay tena marina. Izany izao mahavery fanahy mbola velona izao?
Tsy vita ny miatrika izay tena fototry ny olana efa nifamarafarana hatrany am-boalohany: fakan-kevitra momba ny lalàm-pifidianana, sao miova an-dalana. Nivadika zavatra hafa tokoa, fa lasa kolikoly avo lenta sy bevata? Tsy vitan’izay, lasa ifandroritana mbamin’ny fanaovana tatitra amin’ny mpifidy ny momba izay lalàm-pifidianana izay. Politika tanteraka, arakaraka ny ady tombontsoa sy ny fifandanjan-kery.
Ho tonga hatraiza? Hivadika ho vava ady ny ady vava… Ny vava tsy ambina tsinona no ahitan-doza. Tsy arakaraka izay lazaina koa ny zava-misy sy izay atao. Mahay miteny fa tsy mahay mihaino. Rehefa tonga tokoa ny tokoa vao hifampihaino? Raha tsy manan-tsofina hihainoana ny manampahefana, tsy manana loha hitondra, hoy ny ohabolana danoa izay. Izany izao mahazo sy iainan’ny firenena izao?